तौल घटाउदै हुनुहुन्छ? सचेत रहनुहोस् , स्लिम बन्न खोज्दा युवतीका अधिकांश अंगले काम गर्न छाडे – Himalaya Times ।। One of the leading Newspaper in Nepal is Himalaya times. The online portal of ehimalayatimes.com
तौल घटाउदै हुनुहुन्छ? सचेत रहनुहोस् , स्लिम बन्न खोज्दा युवतीका अधिकांश अंगले काम गर्न छाडे
९ असार २०७९, बिहीबार १०:१३
बेइजिङ : एक वर्षमा ४० किलो तौल घटाएपछि चीनकी एक ३० वर्षीया महिला पछिल्लो समयमा चर्चामा आएकी छिन् । चीनको हेबेई प्रान्तकी नाम नखुलाइएकी ती महिला सुरुमा ६५ किलो थिइन् । १६५सेमी उचाई भएकी उनले अत्यधिक डाइटिङका कारण एक वर्षमा आधाभन्दा बढी तौल घटाएपछि स्वास्थ्यसम्बन्धी गम्भीर समस्याको सामना गर्नुपरेको छ । सोही कारण उनी अस्पताल भर्ना भएकी थिइन् ।
शारीरिक र मानसिक अवस्था कमजोरका बाबजुद उनले खानाका लागि कुनै इच्छा देखाइनन्’, महिलाको उपचार गर्ने एक डाक्टरले भने । उनले अगाडि थपे, ‘उनी गम्भीर बिरामी भइन् र धेरै अंगले काम गर्न छोडेपछि उनलाई उपचारका लागि आईसीयूमा भर्ना गरिएको थियो । ’
खानेकुरा छाड्नुको अतिरिक्त उनले क्याथर्टिक्स, रेचक र एक्युपंक्चरसहित अन्य तौल घटाउने विधिहरू प्रयोग गरेकी थिइन् । २५ केजी तौल भएकी ती महिलालाई अहिले सामाजिक सञ्जालमा चीनको ‘पातलोपनको प्रतिक’ भनेर व्यंग्य गरिन थालिएको छ । चिनियाँ संस्कृतिमा पातलोपनलाई सधैं महत्व दिइन्छ ।
अन्तरिक्षबाट अपतटीय मिथेन ग्यास
दुई वर्षदेखि राहतकै पखाइमा